प्रेस सल्लाहकार थापालाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी
सचिवालय चुस्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत महिना सल्लाहकार तथा सहयोगीको टिम हेरफेर गरे । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त हुन सकेको छैन, बरु प्रधानमन्त्रीलाई झन् अफ्ठेरोमा पार्ने काम हुन थालेको छ । सचिवालयभित्रै विवाद बढ्न थालेको छ । प्रेस सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त सूर्य थापाका कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विवाद बढेको छ । थापाका उच्छृङखल गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री समेत उनीसँग रुष्ट भएको एक अधिकारीले बताए । फेसबुक स्टाटसका कारण थापा पछिल्लो समय विवादमा परेका छन् । उनले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई होच्याइएको एउटा लेख गत सोमबार फेसबुकमा शेयर गरेका थिए । पार्टी एकता नगरेको भए प्रचण्ड एउटा सानो पार्टीको अध्यक्षमा सिमित हुन्थे भन्ने कुरालाई तानेर उनले सो लेख शेयर गरे । जसमा उनीप्रति धेरैले आलोचना गरेका छन् । खासगरी पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरुले आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् ।
सो कुरा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हेरें । प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारले त्यसरी आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा होच्याएको थाहा पाएपछि उनले ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई गुनासो गरे ।
रिमालले तत्कालै थापालाई फोन गरेका थिए । महत्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा विवादित कुराहरु लेख्दा र शेयर गर्न नहुने भन्दै रिमालले उनलाई सम्झाउन खोजेका थिए । तर, थापाले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा भएको भन्दै फोन राखिखिएका थिए । सोही कुरा रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिफ्रिङ गरिसकेका छन् । थापाको त्यस्तो गतिविधि थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई स्पष्टिकण सोध्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार जस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको कुरो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेपछि त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै असर पुगेको छ ।
त्यसरी आफ्नो आलोचना भएपछि उनले सोमबार बेलुका नै फेसबुकमा अर्काै स्टाटस लेखे । जसमा ढेंडु जस्ता शब्द राखिएका छन् । पूर्व माओवादीलाई लक्षित गरी उनले त्यसरी गाली गलौचपूर्ण स्टाटस लेखेका छन् । त्यसले पनि थप विवाद निम्त्याएको छ ।
त्यसो त थापासँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अन्य सदस्यहरु समेत हैरान भइसकेका छन् । थापाले परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको कार्यकक्ष नै कब्जा गरेका छन् । प्रेस सल्लाहकारको कार्यकक्ष उर्जा मन्त्रालयमा थियो । तर, अर्काे भवनमा आफु नबस्ने भन्दै उनी भट्टराईको कार्यकक्षमा गएर बसेका थिए । भट्टराई अमेरिका भएको मौका छोपी त्यसरी उनले कार्यकक्ष कब्जा गरेका थिए । जसकारण भट्टराई र थापाबीच विवाद भएको थियो । नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीमा बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । थापा पहिलेदेखि नै पार्टीमा अजराक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध समेत उनले जथाभावी आरोप लगाएर गाली गर्ने गरेका छन् । खासगरी वामदेव गौतममाथि उनले पटक पटक विषबमन गरेका थिए । नेतामा हुनुपर्ने संस्कार नहुँदा एक महिनामा नै उनको पद धरापमा परेको छ । सुर्य थापा प्रचण्डमाथि निरन्तर तिर प्रहार गरिरहेछन अनि दीपशिखा ढाल बनेर उनको रक्षा ! तीन दिनअघि एक दैनिक पत्रिकामा छापिएको विचारबाट उद्धृत गरिएको अंशसहित प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा एउटा लिंक सेयर गरे। जसमा नेकपा-एमाले एकता अघिपछिको पृष्ठभूमि तथार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शक्तिको रस्साकस्सीबारे स-विस्तार गरिएको थियो। '...यदि प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेसँग नमिलाएको भए के हुन्थ्यो ?
एमाओवादी एउटा सानो पार्टीका रूपमा खुम्चिएको हुन्थ्यो। १० वर्ष युद्ध हाँकेका प्रचण्ड सानो पार्टीका नेता हुन्थे । सम्बोधन हुन्थ्यो, पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड। एमाले र एमाओवादी चुनावी एकतापछि संसद्मा करिब दुईतिहाइ नजिक सिट जिते। संसद्को निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भएन। कारण थियो, ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँटको संघर्ष। चुनावमा एकता भयो, परिणामपछि संघर्ष। दुई नेताबीच एकता र संघर्ष जारी रह्यो। अन्तत: संसद् चुनाव भएको करिब ६ महिनापछि पार्टी एकता भयो। अरू सबै काम बाँकी राखेर दुई अध्यक्ष भएको पार्टी भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)।
पूर्वएमालेले ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरी संसद्को चुनावमा उम्मेदवार तय भएको थियो। त्यही आधारमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ओली र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष प्रचण्ड हुने सहमति भयो', एक पत्रकारको विचारकै यो लाइन उल्लेख गर्दै थापाले फेसबुकमा उक्त लिङ्क सेयर गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता केन्द्रबाट वडा र टोलसम्म पुगिसक्दा पनि दुई पक्षबीचको तुष र विवाद थापाले सेयर गरेको यो लिङ्कसँगै छरपस्ट भएको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाका कार्यकर्ताहरु अझै पुरानै ह्‍याङबाट बाहिर निस्किन नसकेको यो विवादले पुन: पुष्टि गरेको छ। थापा नेकपाका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार बनेको करिब एक महिना हुँदैछ। नेकपाभित्र अर्को समूहबारेमा कठोर टिप्पणी गर्दै आएका थापालाई यो प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले पुन: घेराबन्दी गर्न खोजेका छन्। नेकपाकै एकजना कार्यकर्ताले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जस्तो मान्छेले प्रचण्ड र माओवादीलाई होच्याउने गरी लेखिएको यही लाइन नै सेयर गरेर के गर्न खोजेको?
पार्टी एक भएर पनि थापाजी अझै आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डको मानमर्दनमा उत्रिरहेका छन्।' समाचार लेखककै अंशसहित लिंक सेयर गरेपछि थापामाथि पूर्वमाओवादी पंक्ति पुन: एक पटक खन्‍निएको छ। बलदेभ भट्ट नामका एक व्यक्तिले थापामाथि प्रश्न गर्दै पार्टी फुटाउनै लागेको आरोपसमेत लगाएका छन्। 'माओवादी सकिन्थ्यो वा जे हुन्थ्यो, यो एकीकरणले देशलाई कति घाटा भयो? कि एमालेलाई भयो?', उनले प्रश्‍न गरेका छन्, 'यो समय देश एक हुने बेला हो, तपाईंलाई कसले उचाल्दैछ? यो फुटका लागि र यसका लागि कसको गोटी बन्दै हो तपाईं। भारतीय दलालहरुलाई नपचेको कुरा तपाईंहरु जस्तालाई पनि नपच्नु अनौठो होइन।' थापामाथि यही लेख सेयर गरेका कारण पूर्वमाओवादीका कार्यकर्ताहरुले मुखसमेत छाडेका छन्। एकजना कार्यकर्ताले थापालाई 'चिम्पान्जीको अनुहार' भएको जस्तो भन्दै तुच्छ गाली गर्न पनि भ्याएका छन्। राम कार्की नाम गरेका अर्का कार्यकर्ताले माओवादी नभएको भए एमालेको हावा फुस्किने जिकिर गरेका छन्।
'सानो माओवादी हुने कुरा सही तर घमण्डले फुलिएको एमालेको हावा फुस्किएको ट्युब जस्तो हुनेथियो', उनले भनेका छन्, 'ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्‍ने सपना यो जुनिमा हुँदैन थियो। नत सूर्य भन्‍नेले यति तुच्छ बिचार राख्‍न अवसर पाउँथे।' थापाले यो आफ्नो विचार नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर उनीमाथि पूर्वमाओवादीको तर्फबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ। बिराज गैरे नामका एक कार्यकर्ताले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। 'प्रचण्डको आलोचना गरेर माथि पुग्‍न सक्छु भन्‍ने बठ्याईँ हो यो! धेरै आलोचकहरुले स्वाद चाखेका छन्', उनले भनेका छन्, 'प्रचण्डको आडमा यी नभएको भए ठोकुवा दिन्छु तत्कालीन एमाले र काङ्ग्रेसले 'राजा ज्ञानेन्द्र' मानौं भन्‍ने थिए। यो परिवर्तन नेपाली जनताको राम्रो अवसर हो ! कहिलेयै आउँदैन यो अवसर अब। सूर्य थापालाई तत्काल पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ । यो पार्टीले यस्ता अराजक तत्वलाई छाड्नु हुँदैन।' बलदेव भट्टले पनि थापामाथि धावा बोलेका छन्। 'तपाईं प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएर तपाईंले लेख्नु हुन्‍न, बोल्नु हुन्‍न वा पाउनु हुन्‍न भन्‍ने मेरो मान्यता होइन।
आफ्नो बिचार राख्‍ने पुरा अधिकार छ', उनले भनेका छन्, 'देशको सीमा विदेशीले मिचेको छ। एउटा शक्तिसाली सरकारको प्रधानमन्त्रीको तपाईं प्रेस सल्लाहकार तपाईं आफैँ पत्रकार पनि हो क्यारे! खै तपाईंको कलम त्यता चलेको । प्रधानमन्त्री अशक्त हुनुहुन्छ । यो समयमा तपाईंहरुको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा जागिर मात्रै पकाउने हो?' उनीमाथि प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको आलोचना गरेकै कारण मनपरी टिप्पणी गर्नेको संख्या पनि कम छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेको एउटा पंक्तिले पनि थापालाई 'क्षुद्र' स्वभावको भन्दै आलोचना गरेका छन्। पार्टीमा एउटा गुट चलाएर अर्को गुटमाथि प्रहार गरिनु गलत हुने उनीहरुको तर्क छ।
पार्टी एकता संक्रमणमै रहेका समयमा थापासँग सामाजिक सञ्जालमै चर्काचर्की गरेका तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता रामप्रसाद सासपकोटा 'दीपशिखा' अहिले एकीकृत युवा संघ नेपालका संयोजक छन्। तर थापा र दीपशिखाबीचको सवाल जवाफ अझै सकिएको छैन। थापाले तीन दिनअघि उक्त समाचारको लिङ्क सेयर गरेलगत्तै युरोपबाटै दीपशिखाले फेसबुकमा जवाफ फर्काइसकेका छन्। एउटै पार्टीमा रहे पनि थापा र दीपशिखाबीचको जुहारीले कार्यकर्तालाई पनि मसला दिएको छ। दुई पक्षबीचको यो विवाद तँ तँ र म म को अवस्थासम्म पुगिसकेको छ।
दीपशिखाले युरोपबाटै २४ घण्टाबीचमा फेसबुकका दुईवटा स्टाटस लेखेका छन्। उनले मंगलबार लेखेको स्टाटसको भाषा अलिक नरम थियो भने बुधबार लेखेको स्टाटसको भाषा कडा शैलीको छ। 'जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैरजिम्मेवार बन्ने उरन्ठेउलो हर्कत बन्द गर्ने की', उनले मंगलबार लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ। त्यसपछि युरोप घुमघामकै क्रममा उनले बुधबार अर्को स्टाटस लेखेका छन्। जसमा भनिएको छ, 'तिम्रो भाषा र शैली हेर्दा ३ कक्षा भर्ना गरेर नैतिक शिक्षा पढाउन पर्ने देखियो।'
दीपशिखाको यो जवाफ थापाप्रति नै लक्षित थियो। तीन दिनअघि आफूले सेयर गरेको समाचारमा तुच्छ गालीसहितका कमेन्ट आएपछि थापाले अर्को स्टाटस लेखेका थिए। 'मेरो स्टाटस हो कि अरूको लेख सेयर गरेको भनेर छुट्याउनसमेत नसक्ने मनुवा हुन् कि ढेंडु?', उनले भनेका छन्, 'कति असभ्य र घृणित रहेछन्, एउटा लेखसम्म पढ्न औकात र हैसियत नराख्‍ने स्यालहरूरु छि! छि! मान्छे बन्‍न कति गाह्रो परेको तिनलाई?' दुई पक्षबीचको विवाद चर्किरहँदा धिरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले सूर्य थापालाई गाली गर्नुको औचित्य नहुने पनि तर्क गरेका छन्।
उनले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै पढ्ने र सुन्‍ने धैर्यता राख्न आग्रह गरेका छन्। 'साथी हो, सुन्‍ने र पढ्ने धैर्यता राखौं न। पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा नै उहाँले प्रष्टकुरा राख्नु भएको छ। सही किसिमले समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ। कोही साथीले पनि पूर्वाग्रह र सानो चित्त नबनाउनु होला', उनले भनेका छन्, 'उहाँमाथि यति नकारात्मक हुन आवश्यक कुरा नै होइन यो। उहाँ आफ्नो कर्ममा पकड भएको मान्छे भन्‍ने सबैलाई थाहा छ।' नेकपाकै एकजना कार्यकर्ता उत्तम थापाले यो बेला मतमतान्तरको नभएको भन्दै मिलेर अघि बढ्न सुझाएका छन्। 'विगतकका दिनलाई मतमतान्तर गरेर बस्ने हो भने कोही माइकालालको खैरियत छैन, बहस उचित तरिकाबाट गर्दा राम्रो हुन्छ', उनले भनेका छन्, 'पार्टीकोबारेमा भन्दा देश बचाउनेतर्फ लागौँ। आरोप-प्रत्यारोप हिजो थियो, आज हुनु भनेको घमण्ड हो, जो कोहीले पनि आफुलाई दिएको जीम्मेवारी पुरा गरौँ।'
यस्तो थियो सुर्य थापाले राखेको लेखको अंश :
"..यदि प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेसँग नमिलाएको भए के हुन्थ्यो ? एमाओवादी एउटा सानो पार्टीका रूपमा खुम्चिएको हुन्थ्यो । १० वर्ष युद्ध हाँकेका प्रचण्ड सानो पार्टीका नेता हुन्थे । सम्बोधन हुन्थ्यो, पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड । एमाले र एमाओवादी चुनावी एकतापछि संसद्मा करिब दुई तिहाइ नजिक सिट जिते । संसद्को निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भएन । कारण थियो, ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँटको संघर्ष । चुनावमा एकता भयो, परिणामपछि संघर्ष । दुई नेताबीच एकता र संघर्ष जारी रह्यो । अन्तत: संसद् चुनाव भएको करिब ६ महिनापछि पार्टी एकता भयो । अरू सबै काम बाँकी राखेर दुई अध्यक्ष भएको पार्टी भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । पूर्वएमालेले ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरी संसद्को चुनावमा उम्मेदवार तय भएको थियो । त्यही आधारमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ओली र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष प्रचण्ड हुने सहमति भयो ।